Misy fanamby ho an'ny fandaminana SEO amin'ny sehatra goavana tokony tsy hisalasala ve?
Eny, olana saro-pady manokana izy ireo dia manoloana ny raharaham-barotra lehibe, raha toa ireo sampan-tserasera nomerika ary na dia orinasa IT mbola marefo aza dia mety ho hita fa malemy kokoa rehefa tonga izy ireo. Ny fiheverana ny loza lehibe indrindra amin'ny fandaminana SEO amin'ny sehatra goavana dia tokony hisakana azy ireo tsy hiorim-paka amin'ny vidiny rehetra. Eto fotsiny ny fanentanana miorina amin'ny orinasam-pifandraisana mahazatra indrindra no mety hanampy amin'ny fisorohana ny loza. Izany no mahatonga ny ekipa mpikaroka hijery akaiky sy hamorona tetikady iray mba hisorohana farafaharatsiny ireo fanamby manan-danja mifandraika amin'ny sehatry ny fikarohana ara-tsimia.
Noho izany, inona ireo fisehoan-javatra fototra ao anatin'ny fandaminana SEO ny fahaiza-manao matanjaka kokoa no miady amin'ny manodidina? Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana momba ny indostria, ny fototry ny olana dia hita foana ao anatin'ny iray amin'ireo singa mifandraika amin'ny SEO ao anatin'ny rafitra fandaminana, toy ny fifandimbiasam-pahefana mifandraika; Zava-dehibe ny laharam-pahamehana - commercial real estate valuation reports. Indraindray ny fisehoan-javatra dia vokatry ny tsy fahampian'ny fahalalana lalina sy fanohanana amin'ny fanatsarana. Mety henjana koa ny elanelam-potoana misy eo amin'ny fampiharana sy ny fampiofanana.
Mety misy ny fifehezana amin'ny fifindra-monina raha toa ka tsy tafiditra tanteraka ao anatin'ny sehatra iraisam-pirenena iray ny fikambanana SEO. Ao amin'ny tena fiainana, ny sampandraharahan'ny IT sy ny Marketing dia toerana mahazatra indrindra izay ahitanao ireo ekipa manam-pahaizana manao SEO amin'ny fikambanana na sampana feno. Ny fijerena fa ny fahombiazan'ny SEO manontolo dia matetika ateraky ny fikolokoloana ny tranokala, ny vokatra ara-barotra, ary ny fanapahan-kevitra ara-teknika marim-pototra, dia misy foana ny fanamby manan-danja ao anatin'ny SEO ny fandaharam-potoana goavana mihaona eo amin'ny fitodian-tsoroka sy ny paikady ankapobeny.Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy, ny ekipa fanatontosana fikarohana dia tsy maintsy manao toy ireo antoko mavitrika indrindra, izay vonona sy vonona foana hampiasa ny teknika tsara indrindra ho an'ny fampitaovana isan'andro. Ny teboka fototra dia tokony ho hita amin'ny fitazonana ny fifandanjana ara-potoana eo amin'ny fotoana sy ny laharam-pahamehana, noho izany dia miatrika hatrany ny filàna maika, tsy manala ny teboka amin'ny tetikady manerantany.
Ny tsy fahampian'ny laharam-pahamehana amin'ny laharam-pahamehana dia azo atao amin'ny fampivoarana ny fahazarana miasa tsara, izay ny laharam-pahamehana amin'ny tetikasa tsirairay dia mifototra amin'ny tahiry marina momba ny valiny, tarihin'ny fampiofanana mivaingana sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Mba hampifantoka ny laharam-pahamehana amin'ny laharam-pahamehana, manoro hevitra ny sivana amin'ireo tetikasa rehetra aho amin'ny fiheverana ny fiantraikany eo amin'ny singa fototra amin'ny Search Engine Optimization (tranokala tranonkala, mifandray amin'ny sehatra anatiny sy ivelany, famoronana votoaty na fanatsarana). Raha ny marina dia tsy maintsy mametraka fepetra haingana ianao amin'ny fe-potoana fohy fa ny sasany amin'ireo loharanonao dia tsy mifanaraka. Ary ny tolo-kevitr'ireo manam-pahaizana dia ny hanohana fiaraha-miasa matanjaka sy ny fikirizana amin'ny asa sosialy ao amin'ny Social Media, Paid, ary Organic strategies.
Raha ny mahazatra dia manolotra fomba fitsaboana ampiasaiko aho hampifandanjana ny fahaiza-manaon'ny ekipa mba hamoaka lisitra feno amin'ny tetikasa mahomby sy handray ny laharam-pahamehana (isaky ny telim-bolana) Ny asa manan-danja indrindra amin'izao fotoana izao (indroa isam-bolana), ary matetika fisoratana matetika (indroa isan-kerinandro). Tamin'izany fomba izany, ny ekipanay dia nahavita nanangana fifandraisana tena mavitrika sy mifamatotra, mitazona ny fifandanjana marina eo amin'ny fitombenana goavana, ary ny valiny ara-potoana amin'ny filàna maika, ary koa ny mifantoka amin'ny laharam-pahamehana, ary ny fiaraha-miasa tsara amin'ny tanjona iraisam-pirenena.